China AUMARK TX ifektri abakhiqizi | Izithombe
Hlangana nezidingo zedolobha, ezisemadolobheni angaphansi kwedolobha kanye nezidingo ezimaphakathi nedolobha.
Cabin Umugqa owodwa / owodwa nohhafu
Isisekelo samasondo 2800-4700
Nciphisa Isisindo 2035-4830
I-RANK LDT IZIBOPHEZELE EKUQHUBEKENI NGOKWETHEKHONOLO UKUTHUTHUKISA UKUTHUTHUKISWA KWE-CHINESE LDT Hlangana nezidingo zedolobha, ezasemadolobheni amakhulu neziseduze zamalungiselelo okuhlelwa kwempahla phakathi kwamadolobha, i-Design yeqembu elisebenzisayo elinezidingo eziphakeme zezomnotho.
Ukubuka kwangaphambili kwesibuko
IWiper yesikrini sangaphambili
Injini esebenza kahle ingakhiqiza amandla amakhulu, kuthi u-gearbox weZF ashintshe ngokukhululeka, amandla e-kinetic aqhume khona manjalo.
Izithombe Green Power
Injini ye-BJ493 Series
I-torque enkulu: 202Nm / r / min
I-LOVOL Powerax torque: 202Nm / r
Injini yochungechunge lwe-Phaser
I-torque enkulu: 445Nm / r / min
Ukuqiniswa Kwamaloli Okuqinisiwe
Uphahla oluqinile nezihlalo ze-Ergonomic
Ukuhlolwa kokucindezelwa kophahla kuqinisekisile ukuthi uphahla lungamelana namandla amakhulu. Ukuphepha komshayeli nokunethezeka kutholakala ekamelweni elinezihlalo ezintofontofo namabhande okuphepha asezingeni eliphakeme.
Okokuzikhethela kwe-ABS kuthuthukisa ukusebenza kokuphepha.
Uhlaka lwamaloli luqukethe ifreyimu ehlelwe ngokuphelele ngamabhanti aqinisiwe.
Isiphethu Samaqabunga Emuva: Kufika emithonjeni yamaqabunga engemuva eyi-17, okuyinombolo enkulu kunazo zonke phakathi kwemikhiqizo efanayo, ethwala umthwalo omkhulu
I-Chassis isebenza ngensimbi enamandla amakhulu, i-shaft yedrayivu enezingxenye ezimbili nokuklanywa kwentwasahlobo okuncane, kuthwala amaqhubu amaningi kodwa amancane. Izimbobo ezijwayelekile, iphiko eliphezulu ngaphandle kokuklanywa kwe-rivet, ukuguqulwa okulula.
Isuzu Technology engemuva oluvala amasondo: Isisindo esincane, ukuqina okuhle namandla, ukuthwala umthwalo omkhulu, ukubopha amabhuleki abushelelezi